Lorraine Hansberry - အာဖရိကန်အမေရိကန်ပြဇာတ်ရေးဆရာ
Lorraine Hansberry အကောင်းဆုံး Sun ကတစ်စပျစ်သီးပျဉ်, Broadway အပေါ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အာဖရိကန်အမေရိကန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့ကပထမဦးဆုံးကစားရေးသားခြင်းများအတွက်လူသိများသည်။ သူမသည်ဇန်နဝါရီလ 12, 1965 မေလ 19, 1930 ကနေအသက်ရှင်။ ,
Lorraine Hansberry ရဲ့မိဘများအပါအဝင်, ချီကာဂိုမှာရှိတဲ့လူမည်းအသိုင်းအဝုိင်းအတွက်တက်ကြွစွာနှစ်ဦးတို့သည် လူမှုရေးပြောင်းလဲမှု အလုပ်။ သူမ၏ဦးလေးဝီလျံလီယို Hansberry, အာဖရိကန်သမိုင်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အိမျဧည့်သည်များ Duke Ellington, ပေါလု Robeson နှင့်ပါဝင်သည် ယေရှဲ Owen ။
သူမ၏မိသားစု 1938 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးတင်းကျပ်သောပဋိညာဉ်တရားနှင့်အတူတစ်ဦးအဖြူရပ်ကွက်အတွင်း desegregating, ပြောင်းရွှေ့ခြင်း, အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုတွေရှိခဲ့သော်လည်းတရားရုံးအဲဒီလိုလုပ်ဖို့သူတို့ကိုအမိန့်ထုတ်သည်တိုင်အောင်, သူတို့မရွှေ့ခဲ့ဘူး။ အဆိုပါကိစ္စတွင် (ချီကာဂိုနှင့်အခြားမြို့ကြီးများရှိသူတို့ထဲကပြဋ္ဌာန်းခြင်းရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး) ကိုတင်းကျပ်သောပဋိညာဉ်တရားတရားမဝင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်သည့်အခါ Lee က, vs. Hansberry အဖြစ်အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
တစ်အသားအရောင်ခွဲခြားယူနစ်အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင် Lorraine Hanberry ရဲ့ညီတစ်ခုမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ; အခြားစစ်တပ်အတွက်အသားအရောင်ခွဲခြားနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကန့်ကွက်သည်, မိမိမူကြမ်းခေါ်ဆိုခငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
Lorraine Hansberry ကပထမဦးစွာစာရေးဆရာ, ပြီးတော့တွဲဖက်အယ်ဒီတာအဖြစ်ပေါလုသည် Robeson ရဲ့သတင်းစာ, လွတ်လပ်ခွင့်များအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ထွက်ခွာပြီးတော့, နှစ်နှစ် Wisconsin ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်သည်။ သူမသည်ရှင်ပေါလု Robeson တက်ရောက်ရန်တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသောအခါ 1952 ခုနှစ်တွင်, မွန်တီဗီဒီယို, ဥရုဂွေးအတွက် Intercontinental ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကွန်ဂရက်တက်ရောက်ခဲ့သည်။
သူမသည်တစ်ဦး picket လိုင်းပေါ်ရောဘတ် Nemiroff တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, သူတို့သည်မင်္ဂလာဆောင်အတွက် Rosenberg ၏ကွပ်မျက်ဆန္ဒပြမီညဖြုန်း, 1953 ခုနှစ်တွင်လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။
Lorraine Hansberry သူမ၏အရေးအသားအပေါ်များသောအားဖြင့်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ယာယီအလုပ်အကိုင်အခွင့်အယူလွတ်လပ်ခွင့်မှာသူမ၏အနေအထားထားခဲ့တယ်။
Lorraine Hansberry Langston Hughes '' ကဗျာကိုမှသူမ၏ခေါင်းစဉ်ယူပြီး, 1957 ခုနှစ်သူမ၏ပထမဦးဆုံးကစားပြီးစီးခဲ့ "Harlem ။ "
ဒါမှမဟုတ် run နေတဲ့အနာ-ပြီးတော့တူသောပိုဆိုးရွားလာအောင်? "
သူမသည်အကျိုးစီးပွားထုတ်လုပ်သူများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့်သရုပ်ဆောင်များကိုဖို့ကြိုးစားနေ, ပြဇာတ်, နေမင်းအတွက်စပျစ်သီးပျဉ်ဖြန့်ဝေဖို့စတင်ခဲ့သည်။ Sidney Poitier သား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုယူပြီးစိတ်ဝင်စားထုတ်ဖော်ပြောဆိုနှင့်မကြာမီဒါရိုက်တာနှင့် (လူးဝစ် Gossett အပါအဝင်အခြားသရုပ်ဆောင်တွေ ပတ္တမြား Dee နှင့် Ossie Davis က) ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မှကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ နေမင်းအတွက်စပျစ်သီးပျဉ်မတ်လ 11, 1959 ရက်တွင် Barrymore ပြဇာတ်ရုံမှာဘရော့ဒ်ဝေးရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့။
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာလူ့ခြင်းနှင့်အထူးသလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားများနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ဦးစလုံး themes များနှင့်အတူကစား, အောငျမွငျခဲ့, တစ် Screenplay မကြာမီ Lorraine Hansberry ကိုလံဘီယာရုပ်ပုံများရုပ်ရှင်သို့ခွင့်ပြုခဲ့ရာ၏ဇာတ်လမ်း-အဘယ်သူအားမျှပိုမိုမြင်ကွင်းများကဆက်ပြောသည်ရသောနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
Lorraine Hansberry သူမကအဆိုပါသောက်သုံးသခွားသီးအဖြစ်ပြီးစီးခဲ့သောကျွန်ပြုမှုအပေါ်တစ်ဦးရုပ်မြင်သံကြားဒရာမာရေးသားဖို့တာဝန်ခံခဲ့ရပေမယ့်မခံခဲ့ရထုတ်လုပ်-အား NBC အမှုဆောင်အရာရှိပုံကျွန်စနစ်အကြောင်းရေးမယ့်အနက်ရောင်ဇာတ်ညွှန်း၏စိတ်ကူးကိုထောကျပံ့မပေးခဲ့ပါဘူး။
သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူရွေ့လျား Croton-On-Hudson, Lorraine Hansberry ပင်ကင်ဆာရောဂါရှိတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ခံရပြီးနောက်, အရပ်ဘက်အခွင့်အရေးနှင့်အခြားနိုင်ငံရေးဆန္ဒပြမှုနှင့်အတူသူမ၏အရေးအသားဒါပေမယ့်လည်းသူမ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုမသာဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 1964 ခုနှစ်တွင်အဆိုပါလှုပ်ရှားမှု: တန်းတူရေးတို့အတွက်တစ်ဦးအခက်အခဲအကျပ်အတည်းများက၏မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် SNCC (ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ် ကျောင်းသားအကြမ်းမဖက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ Hansberry အားဖြင့်စာသားဖြင့်) ။
သူတို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ဆက်လက်သော်လည်းသူမသည်မတ်လထဲမှာ Nemiroff ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြသည်။
အောက်တိုဘာလမှာတော့ Lorraine Hansberry သူမ၏သစ်ကိုကစားအဖြစ်ပြန်နယူးယောက်စီးတီးသို့ပြောင်းရွှေ့, Sidney Brustein ရဲ့ Window အတွက်သင်္ကေတပြခြစ်ခြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ဝေဖန်ဧည့်ခံအေးမြခဲ့ပေမယ့်, ထောက်ခံသူများဇန်နဝါရီလ Lorraine Hansberry ရဲ့မသေမှီတိုင်အောင်အပြေးကထားရှိမည်။
သူမသေဆုံးပြီးနောက်သူမ၏ခင်ပွန်းဟောင်းအာဖရိက, က Les Blanc အပေါ်ဗဟိုပြုတဲ့ကစားအပေါ်သူမ၏အလုပ်ကိုလက်စသတ်။ ဒါကပြဇာတ် 1970 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သာ 47 ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်သို့ပွေးလေ၏။
2018 ခုနှစ်တွင်အသစ်တခုအမေရိကန်မာစတာမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, မျက်မှောက်မျက်လုံး / နှလုံး Feeling, ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Tracy ဟဲလ် strain အသုံးပြုပုံဖြန့်ချိခဲ့သည်။
ခမညျးတျော: Carl အေ Hansberry
မိခင်: တရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီကနေ့ပယ်ရီ Hansberry
Wisconsin ပြည်နယ်၏တက္ကသိုလ်, 1948-50
အနုပညာ Institute ၏ကျောင်းသည်
ခင်ပွန်း: ရောဘတ် Nemiroff (1953 လက်ထပ် 1964 ကွာရှင်း)
နေမင်းအတွက်တစ်ဦးကစပျစ်သီးပျဉ် (1959); Screenplay 1960 (1974 ခုနှစ်, တစ်ဂီတအဖြစ်စပျစ်သီးပျဉ်အဆင်ပြေအောင်)
Sidney Brustein ရဲ့ Window အတွက်သင်္ကေတပြ (1964)
သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကား (ရောဘတ် Nemiroff အားဖြင့် Hansberry ရဲ့အရေးအသား၏လိုက်လျောညီထွေ) တွင် Lorraine Hansberry (1969): လူငယ်တို့, လက်ဆောင်, နှင့်အနက်ရောင် Be မှ
က Les Blanc (ရောဘတ် Nemiroff အားဖြင့်ပြီးစီးခဲ့နှင့် edited) (1970)
(1972 ထုတ်ဝေ) ကိုသောက်သုံးသခွားသီး (ရုပ်သံ script ကို)
ပန်းပွင့်အဘယ်အရာကိုအသုံးပြုမှုရှိပါသလား (1972 ထုတ်ဝေ) (ရုပ်သံ script ကို)
က Les Blanc: Lorraine Hansberry (ရောဘတ် Nemiroff အားဖြင့်ပြီးစီးခဲ့နှင့် edited) (1972) ၏စုဆောင်းနောက်ဆုံး Play
နေမင်းအတွက်တစ်ဦးကစပျစ်သီးပျဉ်အဘို့အနယူးယောက်ဒရာမာဝေဖန်စက်ဝိုင်း Award ဆု 1959,
နေမင်းအတွက်တစ်ဦးကစပျစ်သီးပျဉ် (Screenplay) အတွက်ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကအထူးဆု, 1961,
Tallulah Bankhead: Flamboyant မင်းသမီးနှင့်တီဗီ Host က
ရေရှိဖို့အမျိုးသမီးများနေ့ Timeline ကို
ပတ္တမြား Bridges: အပြည်တွင်းစစ်ခငြ့်အရေးလပ်ြရြားမြ၏ခြောက်တစ်နှစ်တာအဘိဓါန် Old သူရဲကောင်း
လုဒိ Pinkham ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အဲလစ်ဇဘက် Vigee LeBrun
Bingen ၏ Hildegard
မာရီယာ Mitchell က: တစ် Professional ကနက္ခတ္တခဲ့သူကားအဘယ်သူ US မှာပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး
အမျိုးသမီးများသမိုင်း မှစ. quotes
ဆီမှက de Beauvoir
ယင်း၏မွမ်းမံဖို့ပိတ်စပိ Adverb သိမ်းဆည်းထားပါ
စိုစွတ်သောပြား Collodion ဓါတ်ပုံပညာ
သင်ခန်းစာကိုအစီအစဉ်: စစ်တမ်းဒေတာနှင့် graph
နိုက်ထရိုဂျင် Narcosis vs decompress ဖြားနာ
အမျိုးသားပန်းခြံဝန်ဆောင်မှု '' ဟင်တိုင်းအဆင့်မှာ, 'အရာရှိကြီးများပြော
ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်နိုင်ငံများ GAO ရှာပြီး, အကြမ်းဖက်ဒေတာများကိုမျှဝေခြင်းမဟုတ်
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်: တစ်ဦးက Theological သီလ
အမျိုးသား ARPA NET နောက်ပိုင်းမှာအာကာသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ (NASA က) ၏သမိုင်း
Ordenes က de Trump sobre, refugiados y ကစရဖ deportaciones